> Resource > Video > Sida loo Play MKV in Windows Media Player
Marka aad isku dayaan in ay ku ciyaaraan files MKV in Windows Media Player, waxaad ka heli doontaa oo kaliya muujinaysaa ma video laakiin audio, ama dhibaato kale oo aan caadi ahayn loo maqli karo. Taasi waa sababtoo ah Windows Media Player ma taageeri qaab MKV natively. Waxaad si loo soo dajiyo codec ku haboon in la kordhiyo qaabab ay taageerayaan. Laakiin codec ku iman mayso Windows Media Player by default, si aad u baahan tahay inaad intall ka codecs saxda ah. Si aad u noqoto qof daacad ah, waa adag tahay in ku dhawaad ​​raadiyo codec baakada ku haboon Windows Media Player. Waxaa laga yaabaa in aad isku daynay muddo dheer, laakiin gebi ahaanba aad u ogaato waxa ka dhan uma shaqeeyo. Sidaas halkan, waxaan ku siinayaa fursado dhowr ah.
Xalka Mid ka mid ah: Ku rakib codec xirmo Windows Media Player
Just isku dayaan inay dhidibbada u aasto Combined Community codec Pack (gaaban CCCP). CCCP waa pack codec aa si gaar ah loogu talagalay ciyaaro videos ay ka mid yihiin MKV. Marka aad u rakibay, aad si habsami leh u ciyaari karo files MKV la Windows Media Player ama Media Classic Player.
Download ku CCCP halkan.
Xalka Labaad: Isku day inaad ciyaaryahan kale oo warbaahinta
Haddii aadan jeclaan rakibidda codecs for Windows Media Player, ama codec ma shaqeeyaan qaar ka mid ah sababaha aan la garanayn, waxaad isku dayi kartaa in aad isticmaasho ciyaaryahan kale oo warbaahinta. Waxaad ogaataan ciyaaryahan VLC. Haa, VLC waa ciyaaryahan cross-madal weyn u furan-il multimedia. Oo ciyaari karaa ugu qaabab multimedia file sida MKV, AVI, MP4, FLV, wmv, iwm, iyo sidoo kale cajalladaha. Laakiin mararka qaarkood, ciyaaryahanka VLC bidbidayaan badan. Halkan, si adag ayaan waxaan soo jeedin Wondershare Player . Waa dhif bidbidayaan. Sida VLC, waxa kale oo uu leeyahay taageero qaab multimedia ballaaran. Moveover, waxa ay leedahay design dareen leh, taageero Cinwaan, iyo muuqaalada ka maskax. Sidaas daraadeed waxaad u isticmaali kartaa sida aad ciyaaryahan warbaahinta oo kaliya.
Xalka Saddexaad: Play MKV in Windows Media Player by diinta
Haddii aadan sameyn jirtay ciyaaryahan kale warbaahinta iyo doonayaa Windows Media Player sida aad ciyaaryahan warbaahinta kaliya, waxaad isticmaali kartaa weyn Video Converter ( Video Converter u Mac ) si loogu badalo MKV in qaab video socon oo kale ah wmv for Windows Media Player . Ha welwelin. Hawlaha qaab beddelidda waa ultrafast iyo tayada wax soo saarka waa sameecadda ah. Iyo barnaamijka mar walba stably ordi. MKV ka sokow, ka dhabayso ku dhawaad ​​kasta oo kale qaabab audio / video inay Media Windows ah Player qaab taageeray.
Talaabada 1: Burcad barnaamijka mar rakibo la dhammeeyo. Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad riix Add Files button on toolbar ah, maraan si gal ah in ka kooban yahay files MKV aad on your computer, ee la soo dhaafay, guji Open si ay u dajiyaan in barnaamijkan.
Talaabada 2: Dooro wmv ka mid ah liiska hoos-hoos dhinaca midig ee interface barnaamijka ee.
Talaabada 3: Si fudud ku dhufatey badalo badhanka si ay u bilaabaan diinta video. Ka dib markii diinta, waxaad ku dari kartaa faylasha wax soo saarka si ay u Windows Media Player inuu u ciyaaro.
Sida loo Play BBC Radio ee Lugood